Momba anay - Omita Lightig
Omita Lightig miaraka amin'ny voasoratra anarana dia nahita RMB 20 tapitrisa tapitrisa hita tamin'ny 2009.
Amin'ny maha-mpamorona, mpanamboatra ary mpanondrana jiro haingon-trano haingon-trano sy jiro Edison, dia nankatoavin'ny mpanjifa manerantany ny vokatra sy ny serivisinay.
Manana orinasa roa izahay izay miorina ao amin'ny Tanànan'i Dongguan miaraka amin'ny atrikasa 6000M2 Factory, trano fanatobiana 2000M2 ary efitrano fampiratiana 400M2. Manana ekipa matihanina koa izahay amin'ny famolavolana, famokarana ary fifehezana QC, ary ekipa Marketing sy varotra.
Ho an'ny jiro fanazavana, mifantoka bebe kokoa amin'ny jiro fandraisam-bahiny haingon-trano fandraisam-bahiny izahay, famokarana trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, fisotroana, Mall ary trano avo hafa. chandelier pendant kristaly, jiro pendant, jiro gorodona, jiro latabatra ary rindrina rindrina ho an'ny fampiharana anatiny sy ivelany samihafa.
Ho an'ny jiro jiro, isika no mpanamboatra lohavola Edison vera feno vera, maodely vaovao vaovao tsy tambo isaina ho an'ny teboka marketing isan-karazany, vidiny mirary ho an'ny orinasa mitombo tsara kokoa. . Na dia lehibe dia lehibe aza ny famokarana jiro, dia nitazona fifehezana kalitao henjana izahay, ary nahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Ho an'ny jiro kofehy dia vokatra azo ampiasaina sy tsipika famokarana izy io mba hampisondrotana ny jiro amidy. Manana milina famolavolana tsindrona ho an'ny famokarana rakotra PC izahay. Manana tsipika famokarana tariby manindrona ihany koa izahay ao amin'ny ozininay manokana.
Ny vokatra sy serivisinay dia nitatra tamin'ny firenena 27 mahery, Europea ary Etazonia ho tsena lehibe, na izany aza dia manana orinasa any amin'ireo firenena an-dàlam-pandrosoana haingam-pandeha toa an'i Brezila, Chile ary Afrika atsimo, Nizeria, Malezia isika.
Ny ankamaroan'ny vokatray dia CE Rohs voamarina, ary azo antoka fa manana UL sy SAA ihany koa.
Ny fihainoana hevitra tsy mitovy amin'ny mpanjifa eran-tany, ny singa indostrialy samihafa manerantany, mandray teknolojia avo lenta farany azo atao, fa tsy manova velively ny saintsika voalohany -Ny hafanam-po amin'ny zavatra vita tsara sy ny vokatra takatry ny daholobe.
Mandehana miaraka amin'ny Jiro ihany no ataontsika.
Miatrika famoahana entona izy
Fitsapana ny photoelectricité